Boky Ara-baiboly Amin’ny Teny Anglisy, Ekosey, Galoà, ary Irlandey
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Catalan Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galicienne Galoà Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Ngabere Norvezianina Oromo Ourdou Ouïgour (Sirilika) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiv Tojolabal Totonac Tseky Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Manao ezaka manokana ny Vavolombelon’i Jehovah any Irlandy sy Grande-Bretagne, * mba hitoriana amin’ny olona amin’ny fitenin-drazany. Anisan’izany ny teny ekosey sy galoà ary irlandey, ankoatra ny teny anglisy.
Nohatsaraina ny tranonkala jw.org. Navoakanay tamin’ny fiteny be dia be izy io tamin’ny Septambra 2012, anisan’izany ny teny galoà sy irlandey. Tamin’ny Aogositra 2014 kosa no nivoaka ny tamin’ny teny ekosey. Manao pirinty boky sy gazety ara-baiboly isan-karazany amin’ireo fiteny ireo koa izahay. Nisy vokany ve izany ezaka izany?
Nandray taratasy mivalona ara-baiboly tamin’ny teny ekosey ny pasitera iray. Tonga dia novakiny mafy be ilay izy, sady nanomboka nitomany izy. Fa nahoana izy no nihetsi-po be hoatr’izany? Gaga izy nahita hoe tena avo lenta ilay fandikan-teny. Hoy izy: “Fa iza no nandika an’ity? Tena tsara be ilay izy.”
Nisy 750 teo ho eo no nitsidika ny jw.org, tamin’ny teny ekosey, nandritra ny volana voalohany namoahana an’ilay izy.
Nilaza tamin’ny Vavolombelona ny mpampianatra iray ao amin’ny Oniversitem-panjakan’i Irlandy, fa tsy mahaliana azy ny fivavahana. Rehefa henony anefa fa afaka mahazo an’ilay bokikely hoe Inona no Voalaza ao Amin’ny Baiboly? amin’ny teny irlandey izy, dia nangataka anankiray. Nilaza izy fa tokony hahazo boky sy gazety ara-baiboly amin’ny fitenin-drazany daholo ny olona. Noderainy ny Vavolombelon’i Jehovah satria miezaka mafy mba hamoaka boky sy gazety ho an’ny olona miteny irlandey.
Faly be ny vehivavy be taona iray rehefa nahazo bokikely ara-baiboly, tamin’ny teny galoà. Hoy izy: “Tsy nandray an’ity mihitsy aho raha tamin’ny teny anglisy no nomenareo an’ahy. Tena tsara be anefa fa amin’ny fiteniko ilay izy.”
Nampitomboina ny zavatra navoakanay tamin’ny teny galoà tao amin’ny jw.org, tamin’ny Aogositra 2014. Hita hoe nitombo avo roa heny mahery ny isan’ny olona nitsidika an’ilay tranonkala, tamin’io volana io.
“Mitovy ny fiteninay”
Rehefa avy nanazava ny Soratra Masina tamin’ny mpianany roa i Jesosy, dia faly be izy ireo sady niteny hoe: “Tsy toy ny nisy afo niredareda ve tao am-pontsika tamin’izy niresaka tamintsika teny an-dalana, ka nanazava tsara ny Soratra Masina tamintsika?” (Lioka 24:32) Tena misy vokany be amin’ny fiainan’ny olona ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly, raha hazavaina tsara amin’ny fiteniny.
Manambady Vavolombelon’i Jehovah ny lehilahy atao hoe Emyr, any Pays de Galles. Tsy nety nanaraka ny fivavahan’ny vadiny mihitsy anefa izy. Lasa ninamana tamin’ny Vavolombelona atao hoe Russell izy, tatỳ aoriana. Inona no nampiova azy? Hoy izy: “Tena tapa-kevitra ny hianatra Baiboly amin’izay aho, rehefa nitondran’i Russell an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? * Nomeny an’ahy ilay izy sady niteny izy hoe: ‘Amin’ny teny galoà ity, ary androany ihany isika dia efa hanomboka hiara-hianatra azy ity.’” Fa nahoana i Emyr no tonga dia nanaiky na dia nivantana be hoatr’izany aza ny tenin’i Russell? Hoy izy: “Mitovy ny fiteninay, sady mitovy kolontsaina koa izahay dia mifankahazo resaka tsara.” Hoatran’ny hoe “nisy afo niredareda” tao am-pon’i Emyr rehefa nianatra Baiboly tamin’ny teny galoà izy. Izany mantsy no fitenin-drazany ka azony tsara ilay fanazavana.
Mbola miezaka mampiasa ny fitenin-drazan’ny olona foana ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hanampiana azy ireo hahalala an’Andriamanitra. Manohina ny fo mantsy ilay izy raha atao amin’ny fiteniny.
^ feh. 2 Manondro an’i Angletera sy Ekosy ary Pays de Galles ilay hoe Grande-Bretagne.
^ feh. 11 Boky fianarana Baiboly navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Fitsidihana An’i Irlandy
Fitoriana any Amin’ny Faritany Mitokana: Irlandy
Fivoriamben’ny Vondrom-paritra Manokana Tany Irlandy